बिलगेट्सभन्दा धनी बने जेफ बेजोस ! - IAUA
बिलगेट्सभन्दा धनी बने जेफ बेजोस !
ramkrishna November 7, 2017	बिलगेट्सभन्दा धनी बने जेफ बेजोस !
संसारकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिङ कम्पनी अमेजनका सीइओ जेफ बेजोस विश्‍वकै धनी व्‍यक्ति बनेका छन्।अमेरिकी आइटी अनलाइन ब्लुमबर्गले गरेको सर्वेक्षणमा सिइओ बेजोसको कम्पनी अमेजनले शुक्रबार मात्रै १३ प्रतिशत कमाएपछि उनी विश्‍वकै धनी व्‍यक्तिमा सूचीकृत भएका हुन्। website designing company
यस्तै वारेन्ट बफेट विश्‍वको तेस्रो धनी व्‍यक्तिको सूचीमा परेका छन्। उसको कुल सम्‍पत्ति ८१ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ भने चौथो नम्बरमा परेका अमानसियो ओर्टेगाको कुल सम्पत्ति ७७ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यस्तै फेसबुकका सीइओ मार्क जुकरवर्ग पाँचौ नम्बरमा छन्। जुकरवर्गको कुल सम्पत्ति ७५ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। एजेन्सी
Previous Previous post: महिलाको वक्षस्थल बारे अचम्मको केही रोचक तथ्यहरु
Next Next post: जनता ‘ऋणमुक्त’ भएपछि नेपाल संवत्